Franck Ribery Numberka u xiran doono kooxdiisa cusub ee Fiorentina oo la shaaciyey %
Franck Ribery Numberka u xiran doono kooxdiisa cusub ee Fiorentina oo la shaaciyey
By Ramzi Yare	 Last updated Aug 22, 2019
Kooxda Fiorentina ee dalka Talyaaniga ayaa xaqiijisay lambarka uu u xiran doono saxiixeeda cusub ee Franck Ribery.
Franck Ribery ayaa kooxdiisa cusub ee Fiorentina u xiran doona xilli ciyaareedkan Nambarka uu caanka ku yahay ee 7-aad kaddib markii uu dhammaystiray ku biiristiisa beeca xorta ah ee kooxda dalka Talyaani.
Waxaa Ribery loo gacan geliyey Nambarka 7-aad ee Viola, inkastoo xiddiga ku cusub kooxda ee Erick Pulgar kaliya la siiyay Nambarkaan horraantii bishaan.
Xiddigan dalka France ayaa watay Nambarka 7-aad intii lagu guda jiray 12-kii sano ee uu ku sugnaa kooxda Bayern Munich, halkaasoo uu ku qaaday sagaal koob oo horyaalka Bundesliga ah iyo hal Champions League.
Ribery ayaana Bayern Munich u saftay 425 kulan, waxaana uu u dhaliyey 124 gool, sidoo kalena waxa uu 81 kulan u ciyaaray xulkiisa qaranka Faransiiska, waxaana uu ka caawiyey inay gaaraan Final-kii Koobkii Adduunka ee 2006 oo uu ka qaaday xulka Talyaaniga.
15kii Saxiix Ee Ugu Xumaa Ee Abid Soo Maray Kooxda Manchester United
Real Madrid Oo PSG U Gudbisay Dalab Ka Wanaagsan Kuwii Hore